Asiqaphele izinto ezincane ngoba yonke into esiyenzayo empilweni iyibhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela | Umbele
Asiqaphele izinto ezincane ngoba yonke into esiyenzayo empilweni iyibhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela
ZININGI izindlela zokungena ebhizinisini njengoba sesike sachaza ezingosini ezedlule. Namhlanje ngithanda sibheke ukuthi yini lezi zinkomba zokuthi ngelinye ilanga ungagcina ungenile ebhizinisini.
Asizalwanga sonke emizini enosomabhizinisi njengoba kuye kwenzeke kwezinye izinhlanga. Ukuzalelwa ebhizinisini kwenza ukuthi noma wubani okhulela kulelo bhizinisi abe nesifiso sokuthi ngelinye ilanga naye azivulele ibhizinisi lakhe.
Loku kwenziwa nawukuthi inkulumo esuke ikhulunywa ekhaya imayelana nebhizinisi, ngakho-ke kuba lula ngisho ukubamba namatemu asetshenziswa uma kukhulunywa ngezebhizinisi.
Loku kuvamise kubeLungu nasemaNdiyeni; zithi izingane zabo zikhula nje, zibe ziqonda kahle ukuthi liyini ibhizinisi futhi liyenza kanjani imali.
Kanti ngapha kithina ndlu emnyama bayingcosana kakhulu ababa naleli thuba. Iningi lethu likhula libona abazali bethu befukuza emajalidini noma emzimbonini eziphethwe ngabeLungu namaNdiya, abanye abagcina beklonyeliswe ngewashi mhla sebethatha umhlalaphansi. Loku kwenza ukuthi ingqondo yengane ekhula ngaphansi kwalesi simo izitshele ukuthi ayikho into edlula ukusebenzela omunye umuntu noma embonini ethile uze uyeke mhla usuya empeshenini, abaphathi bakho sebekuklomelisa ngewashi. Sisebenzela iwashi.
Okubuhlungu kunako konke wukuthi alikho ikhono thina abantu abamnyama esilidlulisela ezinganeni zethu, ngaphandle kwemali yempesheni kanti lezi ezinye izizwe zidlulisa ifa nekhono elingunaphakade eliyophilisa izizukulwane; ifa lokuqhuba ibhizinisi.
Ngithanda ukuthi usabalalise umqondo wakho mfundi namhlanje ukuthi ubone impilo ngendlela ehlukile kunalena obukade uyibuka ngayo seloku wazalwa. Singebe nekhono lokuqhuba amabhizinisi kodwa uma ubhekisisa kahle, uzobona ukuthi impilo esiyiphilayo, yonke iyibhizinisi uqobo. Uzomangala ukuthi kanjani.
Ibhizinisi lakhiwe yizinhlaka ezehlukene ezenza kube nomkhiqizo nokuhweba. Impilo yethu yonkana imayelana nokuhweba nokukhiqiza. Ukunyakaza kwakho nje uphuma embhedeni usuke usuqalile ukubamba isandla ebhizinisini lempilo ngoba yonke into oyenzayo kukhona ozothola imali ngawe.
Uthi uma usuphumela ngaphandle, ubona isiphithiphithi sabantu beya noma bebuya emisebenzini, ukunyakaza kwabo nje, kukhona owenza imali ngako. Izikole esiyisa izingane zethu kuzo nazo zisebhizinisini, zihweba ngolwazi bese thina sikhokhela lolo lwazi.
Ziningi ke izinto esingazifundisa zona njengoba siqhubeka nempilo nje. Uma unekhono onalo, mhlawumbe lokubhaka, ungabhaka amakhekhe bese wazisa umphakathi ukuthi udayisa amakhekhe. Loko sikubiza ngokukhangisa, kube khona ohambisa ama-oda amakhekhe komakhelwane, loko sikubiza ngokusatshabalalisa impahla. Uma kwenzeka ufika emzini thizeni, bakhale ngokuthi ikati lilele eziko bacela ukuwakweleta amakhekhe akho, loko sikubiza ngokuthenga ngesikweletu. Kwenzeke uthi usasabalalisa amakhekhe, uwe ngebhayisikili, achitheke wonke agcwale inhlabathi, loko sikubiza ngokulahlekelwa wumkhiqizo.
Kuthi ngelinye ilanga ube nenkinga yokuthola izithako zamakhekhe ngoba kushoda imali, bese uzikhalela kokudayiselayo, akwehlisele inani, loko sikubiza ngokunxusa. Uwadayise kakhulu amakhekhe akho, wenze inzunzo enkulu, sekufanele uze uthole abasizi ukhiqize okuthe xaxa, loko kusho ukukhula kwebhizinisi.
Lezi zinto engizibalulayo zibukeka zincane kodwa sizenza imihla namalanga. Ngisho ubala imali etekisini, uzonikeza abantu ushintshi; naloko wukuhweba okuhambisana nokukhulumisana nabathengi, lapha okungabagibeli. Yilapho iningi lethu thina bantu abamnyama sithola khona ithuba lokuziqeqesha ezinhlakeni zamabhizinisi kodwa wukuthi asinaki ngoba emqondweni wethu kunento ethi kufanele size sibe sebhizinisini langempela, kanti ulwazi nekhono sikuqoqa khona kulezi zinto ezincane okuzothi mhlazane sazithola sesisebhizinisi bese ziyagqama.
Abanye baba nothando nje lokusiza umakhelwane kwizipaza kanti sekuqala kona njalo ukuqeqeshelwa izinto ezinkulu. Kwabanye kube yikhono lokuthenga izinto ngenani eliphansi bese bezidayisa ngentengo ethe xaxa; nako loko kuveza ikhono lokuthi empeleni uyakwazi ukuhweba.
Ake sibheke zonke izinto esizenzayo empilweni ngoba noma ngabe yini esiyenzayo kufanele siqonde ukuthi impilo uqobo iyibhizinisi.
UBiyela ungumeluleki wosomabhizinisi enkampanini iMindset Shift Consulting
Wenza okungavamile ezindaweni zabantu abamnyama onezindawo ezixilonga ngeX-ray. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngomsebenzi wakhe